Vokpụrụ dị mkpa nke ụbọchị: Mkpa maka Ndụ Ọha | Ilblogdellafede
Nkuranhyɛsɛm a ɛtete saa: bere a ɛsɛ mu
AK OFKỌ ND LIFE
1. Mkpa maka ndụ. Usoro bụ iwu; ọ bụrụ na ihe enyere n'iwu ka ọ dị, ka ha zuru oke, ka St. Augustine kwuru. Ọ bụrụ n’ile anya n’elu igwe, ihe niile na-adị n’usoro, anwụ anaghịkwa esi n’ụzọ ya agafe. Lee ugbụ a, zuru oke na oge nke oge! Ihe niile ekere eke na-erube isi n'iwu Chineke nyere ya na ụwa niile. Maka anyị, inwe ọchịchị n’ụbọchị pụtara ibi n’usoro, nwee ọ joyụ n’obi anyị; ọ na-ebi ọ bụghị na mberede, kama ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị debere maxim a! Kama, lee ọgbaghara dị n’ime gị!
2. ọkọlọtọ maka ihe ime mmụọ. Kedu uru ọ bara, na ekpere, n'ihe mgbochi, na ịlụ ọgụ nke agụụ, ime ọtụtụ ihe otu ụbọchị, ma echi ya ihe ọzọ? Mepụta ụkpụrụ kwesịrị ekwesị, ka Ahịa kwuru, mgbe ịgachara onye isi mmụọ gị, ma soro ya; yabụ, dị ka nke okpukperechi, ị ga-ejide n'aka na ị na-eme uche Chineke, ị ga-ezere ọgba aghara ahụ, ike ọgwụgwụ nke akpata ejighị n'aka na ịrụ ọrụ. Kwa abali nile, ole o kwesiri ka ị gha n’aka! Mana ọ furu oke ego iji nwee ụdị iwu a? Gini mere ị gha idozi ya?
3. Anọgide na-eso usoro. Mgbe ị na-enweghị ike inyocha ya, echegbula onwe gị banyere ya, ka ahịa na-ekwu, kama maliteghachi na-echi ya, ma jiri ntachi obi soro ya; afo oyokụt mfri ke utịt uwem. Ahapụla ya dị ka ekwesịghị ntụkwasị obi. Chineke nọnyeere ha; ọbụghị maka ịdị-ọcha, nke gbasara mkpụrụ obi gị; ọ bụghị site na ịkpọasị mgbe niile ime otu ihe ahụ; ọ bụ naanị ndị na-anọgidesi ike ka a ga-azọpụta. Kedu ihe bụ iwu gị? kedu ka isi soro ya?
EGO. - Setịpụ ụkpụrụ nke ndụ, opekata mpe maka omume ịtụ egwu na maka ihe omume kachasị mkpa nke steeti gị.
← Na post gara aga Gara aga post:Na-atụgharị uche taa banyere obi willing dị njikere ịsị eziokwu siri ike
Ọzọ Post → Post ozo:Saint John Vianney, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 4